Diovina amin'ny cellulite
Ny tanjona fototra amin'ny fihinanana selulita dia ny fampidirana ny ampahany betsaka amin'ny vokatra izay mampiroborobo ny metabolisma araka izay azo atao ao anatin'io sakafo io, izany hoe, miaraka amin'ny venty indrindra amin'ny vitamina, calcium sy potassium, ary koa fibre.
Ny cellulite dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fiarovana ny vatana, ny fanesorana azy io toy izany dia saika tsy azo atao, ary tsy ilaina izany. Fa mba hanatsarana ny elasticité ny hoditra, hampihenana ny fiterahana ary ny habetsaham-bola mavesatra dia tena marina.
Ny fihinanana fanafody cellulite dia tsy fampiasana sira. Ny sira no mampiato ny rano ao amin'ny vatana, ka mahatonga azy ireo hampitombo ny fiantraikan'ny volombava. Ny kalcioma sy ny potassium dia manampy amin'ny fanesorana rano be loatra ary manatsara ny elasticité ny hoditra.
Ao anatin'ny ady atao amin'ny cellulite, ny sakafo dia tokony ahitana legioma sy voankazo, trondro ary fako. Aza miditra amin'ny fampiasana sakafo voatoto, voatafika, vokatra voamadilo, mamy, sakafo haingana ary fisaka.
Ny proteina amin'ny selulita
Ny hevi-dehibe amin'io fihinanana io dia ny fampihenana ny fihenan'ny voambola sy ny tavy. Miaraka amin'ny enta-mavesatra ara-batana, dia manome ny vokatra haingana araka izay azo atao rehefa tsy lany. Ny fampitomboana ny habetsahan'ny proteinina amin'ny fanatanjahan-tena manintona ny fitomboan'ny mozika, ary ny fofom-borona ao amin'ny mitochondria amin'ny tavy, rehefa manome hery. Arakaraky ny habetsaky ny hozatry ny hatavezina, vao mainka mirehitra ny hery ary ny hery dia alefa. Zava-dehibe ny mampiasa proteinina faran'izay matavy, izany hoe trondro mena, henan'alika, vokatra avy amin'ny ronono miaraka amin'ny vovo madinika indrindra. Ny fihinanana proteinina dia tena mahomby amin'ny cellulite, ny tena zava-dehibe dia ny hampifangaro azy amin'ny toetoetra.
Ny tsara indrindra amin'ny cellulite
Ny sakafo ho an'ny sakafo toy izany dia tsy maintsy misy grapefruit. Manana singa manokana niringin izy io, izay iray amin'ireo mpanampy tsara indrindra amin'ny ady amin'ny cellulite. Ny Niringin dia manakana ny fihenan-tsakafo ao anaty tsina, manatsara ny fihenan'ny tavy matavy ary manala ny hoditra.
Mihinam-panafody amin'ny selulita
Ny sakafo maraina - tapany grapefruit, voankazo, muesli tsy misy siramamy, ronono maimaim-poana, yogourt, tantely sy akorany vitsivitsy. Azonao atao ny manamboatra mofo avy amin'ny volon'ondry manontolo.
15 minitra alohan'ny sakafo, misotroa jaspy grapefruit, azafady ny manosotra ny holatra miaraka amin'ny fotsy fotsy, izay ahitana ny ankamaroan'ny nirginine.
Sakafo - mofo lasopy, voankazo.
Alohan'ny sakafo hariva na avy hatrany, sokatra avy amin'ny grapefruit!
Sakafo hariva - heniheny, trondro mena ho an'ny mpivady. Mba hanamboarana legioma mena, boaty kely vita amin'ny boaty na couscous . Ireo rehetra manana sira kely farafahakeliny.
Sakafo amin'ny akondro
Ny sakafo voa kongona mandritra ny 7 andro
Ny soso-kevitra momba ny fialana amin'ny Pelagia
Famaritana ny andro famoahana
Sakafo miaraka amin'ny oxalate amin'ny urine
Sakafo ho an'ny aretin'ny pancreatika
Cookies "Ny rantsan-doha"
Toerana mavo eo amin'ny vatana
Voankazo mamy miaraka amin'ny voankazo iray manontolo
Fitball ho an'ny vehivavy bevohoka
Fialana amin'ny fivalanana
Vitamina haingana mandritra ny herinandro
Ahoana ny fisafidianana milina fanasan-drivotra - inona no tokony handinihana ny mividy?
Mihena ny fanaintainan'ny sofina
Kim Kardashian nanambara ny famoahana ny fampisehoana vaovao ary nizara ny eritreriny momba ny biopic
Nosamborina ny zanak'i Sean Penn sy Robin Wright
Ahoana no tokony hanehoana ny rononon-jaza?